Umboniso wemakethi yeminyaka eyi-10 ye-Embraer ichonga iindlela ezintsha zokuhamba ngomoya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Umboniso wemakethi yeminyaka eyi-10 ye-Embraer ichonga iindlela ezintsha zokuhamba ngomoya
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba zaseBrazil zokuQhekeza • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
EmbraerI-Outlook esandula ukupapashwa yeNtengiso yeNtengiso ye2020 ivavanya imfuno yabakhweli yokuhamba ngenqwelomoya kunye nokuhanjiswa kweenqwelomoya ezintsha kule minyaka ili-10 izayo kugxininiswa ngokukodwa kwicandelo lemveliso ye-Embraer - inqwelo moya ukuya kuthi ga kwizihlalo ezili-150. Ingxelo ichonga iindlela ezivelayo eziza kuba nefuthe ekukhuleni, izinto ezenza ukubakho kweenqwelo moya zexesha elizayo, kunye nemimandla yehlabathi eya kuthi ikhokele ibango kwicandelo lezorhwebo.
Ubhubhane wehlabathi ubangela utshintsho olusisiseko olwakha ngokutsha iipateni zohambo lomoya kunye nemfuno yenqwelomoya entsha. Kukho abaqhubi abane abaphambili:
Ukuphathwa kwamalungelo eFleet - ukutshintshela kumthamo omncinci, inqwelomoya ethe kratya ukuhambelana nemfuno ebuthathaka.
Ukwahlula indawo - iinkampani ezifuna ukukhusela unikezelo lwazo kumakhamandela angaphandle ziya kuzisa amashishini kufutshane, kuvelise ukuhamba kwezithuthi okutsha.
Ukuziphatha kwabahambi - ukukhetha ukuhamba ngenqwelomoya okufutshane kunye nokwabela abaphantsi iiofisi ezivela kumaziko amakhulu ezidolophini kuya kufuna uthungelwano lomoya olwahlukeneyo.
Indalo esingqongileyo-ehlaziyiweyo kugxilwe kwiindlela ezifanelekileyo ngakumbi, zeenqwelomoya.
"Impembelelo yexesha elifutshane kubhubhane wehlabathi uneempembelelo zexesha elide kwiimfuno ezintsha zeenqwelomoya," utshilo u-Arjan Meijer, uMongameli kunye ne-CEO ye-Embraer Commerce Aviation. Uqikelelo lwethu lubonisa ezinye zeendlela esele sizibona - ukuthatha umhlala-phantsi kwangethuba kweenqwelo-moya ezindala nezingasebenzi kakuhle, ukukhetha iinqwelo-moya ezincinci ezinenzuzo enkulu ukuthelekisa imfuno ebuthathaka, kunye nokubaluleka okukhulayo kothungelwano lwenqwelo moya lwasekhaya nolwengingqi ekubuyiselweni inkonzo yomoya. Iinqwelomoya ezinezihlalo ezingama-150 ziya kuba luncedo ekuvuseleleni ngokukhawuleza kushishino lwethu. ”
Ukuhamba kwabantu jikelele (kulinganiswa kwiRhafu yabaHambi beRhafu - ii-RPKs) kuya kubuyela kumanqanaba e-2019 ngo-2024, kodwa ihlale i-19% ngaphantsi kwengqikelelo yangaphambili ye-Embra kule minyaka ilishumi, ukuya ku-2029.
Ii-RPKs eAsia Pacific ziya kukhula ngokukhawuleza (3.4% ngonyaka).
Iijethi ezintsha ezingama-4,420 ukuya kuthi ga kwizihlalo ezili-150 ziya kusiwa ngo-2029.
I-75% yokuhanjiswa iya kuthatha indawo yenqwelo moya egugayo, i-25% imele ukukhula kweemarike.
Isininzi siya kuba kwiinqwelomoya kwiNyakatho Melika (iiyunithi ezili-1,520) naseAsia Pacific (1,220).
I-1,080 ye-turboprops entsha iya kuhanjiswa nge-2029.
Uninzi luya kuba lindiza zaseChina / eAsia Pacific (iiyunithi ezingama-490) naseYurophu (190).
I-Aviation inokuba lilitye lembombo njani kwi-UK's Global ...
I-England iphakamise yonke imiqobo ye-COVID-19 ngoJulayi 19 ...
Ubhaliso lwe-IMEX eMelika lubonisa ukunyuka okuqinisekileyo